Ukuhamba kweBozoma Saint John ukusuka eApple ukuya eUber kuqinisekisiwe | Ndisuka mac
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele ngamarhe okuba umlawuli wentengiso we-Apple Music, uBozoma Saint John, unokucinga malunga nokushiya inkampani esekwe eCupertino. Kwingcaciso ephambili ngoMvulo odlulileyo, uBozoma khange avele eqongeni, into leyo Besikuqhelile oko kusungulwa iApple Music ukuthetha ngenkonzo yomculo osasazayo. Kwiintsuku ezimbini emva kwengcaciso ephambili, kwaqinisekiswa ngokusesikweni ukuba iBozoma Saint John iyayishiya le nkampani iye kujoyina u-Uber njengomlawuli wegama.
Kuyabonakala ukuba, u-Uber utyikitye iBozoma ukuba zama ukuphucula umfanekiso wakho woluntu emva kwamanyundululu amaninzi ajikeleze inkampani, njengokugxothwa kwabasebenzi abangaphezulu kwama-20 ngokuzikhusela kwizinyanzeliso zesincwaso, kokubini ukungalunganga kwabo kunye neendlela ezimbi ze-CEO enempikiswano. Ngokwengxelo ezenziwe nguBozoma kupapasho lweRecode:
Uqeqesho lwam yintengiso. Ndiza kugxila kulo msebenzi kule minyaka imbalwa izayo. Ishishini liza kuqhubeka likhula kwaye ukuthengisa kwebranti kufuna utshintsho rhoqo kwiinyanga ezintandathu.
Ngaphambi kokufika kwakhe eApple, eBozoma wayesebenza kwiiBeats Kude kube kuthengwe yi-Apple, abe yinxalenye yabasebenzi be-Apple Music njengoMlawuli weNtengiso. Ngaphambili wayesebenza ePepsico, ekwangumphathi wentengiso.
Emva kokuhamba kweBozoma, kusele abaphathi abathathu abakwizikhundla eziphezulu Kwinkampani: Lisa Jackson (VP Umgaqo-nkqubo wokusiNgqongileyo), u-Angela Ahrendts (iNtloko yezePhysical and Online Stores), kunye noDenise Young Smith, VP Ukubandakanywa kunye nokwahluka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukuhamba kukaBozoma Saint John e-Apple ukuya e-Uber kuqinisekisiwe
I-Apple ilungiselela ukusasaza "iPlanethi yeeapps" ngokuhlwanje